Nepal Dayari | कठै!! एकैचोटी ३ सन्तान र श्रीमतीको ला”स पो”लेका ९० वर्षीय एक्लो बुबाको रु”वाउने कथा, हेर्नुहोस भिडियो
कठै!! एकैचोटी ३ सन्तान र श्रीमतीको ला”स पो”लेका ९० वर्षीय एक्लो बुबाको रु”वाउने कथा, हेर्नुहोस भिडियो
बैसाख १६, २०७९ शुक्रबार २१२ पटक हेरिएको
मानिसको जिन्दगी कुन बेला के हुन्छ ? कति बला मरिन्छ ? कहिले कुन अवस्था मा हुइन्छ केही पनि थाह हुँदैन। एउटा यस्तै घट”ना छ जसले जो कोहीको पनि आँ”सु आउन सक्दछ।
एकजना ९० वर्षीय वृद्ध जो अहिले एकलै बस्नु हुन्छ। उनको परिवारमा पहिले नै सार्है नै दु”खद घ”टना घटेको रहेछ एकैचोटी ३ सन्तान र श्रीमतीको बिते”का रहेछन । त्यो बेला कस्तो भयो होला यी बुबालाई कठै बरा!! अझै ती सबैको ला”स पोलेका पनि रहेछन् ।
काम गर्नको लागि जग्गा भएपनि केही गर्न सक्दिन भन्छन् यी बुबा। सवै खानेकुरा छोरीले ल्याइदिन्छिन् भन्दै छोराछोरी येस्तै हुन भन्दै रमाइला कुरा गर्छन। हेर्नुहोस भिडियो